Ankitsim-po: maro ny miasa ivelan’ny ara-dalàna | NewsMada
Par Taratra sur 28/01/2020
Manana anjara andraikitra lehibe ny fanjakana amin’ny fampandrosoana ny fizahantany. “Raha ny tena marina, tokony ho laharana voalohany amin’ny fanosehana ny toekarena ny fizahantany, noho ny fananantsika tolotra maro isan-karazany”, hoy Ralisaona Toky Nandrianina, mpitantana ny Tour Operator MGIT ( Madagascar grande île travel). Sehatra tsy tokony hatahorana ny miditra aminy, indrindra ho an’ny tanora. Efa misy ny Ivontoerana, INTH manofana tanora maro ho amin’izany sehatra izany, saingy ny olana farany ny fahitana famatsiam-bola. Tsy amin’ny fizahantany irery izany !
Sarotra ho an’ny tanora maro ny mindram-bola amin’ny banky, eo koa ny zana-bola ambony sy ny antoka takina. Manampy betsaka ireo vao hiditra amin’ny fandraharahana anefa ny EDBM (Economic development board of Madagascar), manoro lalana sy hevitra momba izay tetikasa volavolaina sy izay tokony hatao rehetra amin’izany.
Ny olana eto an-toerana, betsaka ny zatra tsy manara-dalàna, koa mandeha ila koa ny zavatra ataony. Fifampiresahana amin’ny EDBM anefa, ankoatra ireo antontan-taratasy ilaina, misy ny fanofanana hatrany hatrany amin’ny fahitana famatsiam-bola. Maro ny mampiasa vola eto, betsaka ihany koa ny Malagasy manam-bola, saingy misehatra ivelan’ny ara-dalàna. Ireny anefa manapotika ireo manara-dalàna, izay toa jerem-potsiny tsy mitondra fahombiazana ho an’ny toekarem-pirenena.